iiplani ezilandiweyo ezingabonisi isikhumba sangaphandle, oko kukuthi iMin Marauder ibonisa kuphela inne
umbuzo iiplani ezilandiweyo ezingabonisi isikhumba sangaphandle, oko kukuthi iMin Marauder ibonisa kuphela inne
I-1 nyaka iiyure ze-11 ezedlulileyo #965 by robtho
Xa ndikhuphela iindiza ezithile, oko kukuthi uMartin Marauder C47 Boeing Superfotress Ndifumana kuphela umsebenzi wangaphakathi wendiza ebonisa
I-1 nyaka iiyure ze-5 ezedlulileyo - I-1 nyaka iiyure ze-5 ezedlulileyo #966 by DRCW
Ngaba usebenzisa iDX9 okanye iDX10 ukujonga kuqala? Ngaba uqhuba i-FSX Steam okanye i-Boxed? Ukuba i-Boxed uhamba nayo okanye ngaphandle kokukhawuleza? Nguwuphi uhlobo lweefestile onalo?
Uhlobo lokugqibela: 1 unyaka wee-5 iiyure ezidlulileyo DRCW.
iinyanga 11 4 kwiiveki ezidlulileyo #967 by robtho
Ndiqhuba i-DX11 kwiifestile ze7 zeefestile ngeenguqu ezichanekileyo zeFSX. Ndiye ndathatha umhlala-phantsi kwaye ndibuyela emva kweemoto emva kwexesha elide ngoko ke ndiyinto enqabileyo. Kodwa ndiyifumana le nwebhsayithi engummangaliso kwaye ezininzi zokukhuphela zibonakala zisebenza kakuhle.Unfortunateley yizona ozithandayo ngokwenene
iinyanga 11 4 kwiiveki ezidlulileyo - iinyanga 11 4 kwiiveki ezidlulileyo #968 by DRCW
Sawubona kwakhona ... I-FSX kwimenyu yakho yokukhetha ingasebenza kwi-DX9 okanye i-DX10 Phambili / Xa i-FSX idalwe, ngaphambi nje kokukhutshwa kwe-DX10, kodwa isebenza kwi-DX9 ngokungagqibekanga. Yiya kwimenyu yakho yokukhetha kwaye qinisekisa ukuba ibhokisi lokujonga kuqala le-DX10 alihlolwanga. Inqwelo ye-Rikooo yonke iqhuba iDX9 ngokungagqibekanga. Ezinye ziyi-DX10 ehambelanayo ukuba ngaba iya kuba yinkcazo. Kukho uyilo lokuhlawula i-payware elikhoyo ukulungisa ukujonga kuqala kwe-DX10, kodwa ngaphandle kokuba uthenge loo program, kungcono ukuqhuba i-FSX kwi-DX9. Ikhefu lokujonga kuqala le-DX10 alisebenzi kakuhle, kwaye lichaphazela imifanekiso. I-Windows 7 yinqanaba elizinzileyo leFSX kwaye oko ndiyisebenzisela ukufaniswa kwendiza. Ngoku utshilo uqhuba ingcaciso eqondekileyo yeFSX. Ukuba ndiyiqonda le nto ithetha ukuba unomnye wee-bhokisi zokukhishwa kuqala zebhokisi okanye i-deluxe version. Ukuba ngaba kunjalo kuyakufuneka ulayishe i-SP1 ne-SP2, okanye ukunyanzela kufuneka kwongezwe. Ngaphandle koko, ininzi ye-freeware kunye ne-payware iya kuba nemiba yokuthungatha. Ndinomxholo wegolide weFSX oza kunye ne-disk yokukhawuleza. Uninzi ukuba uya kufumanisa ukuba ngaphandle kokuba uhlolwe ibhokisi ye-DX10 yokujonga kuqala xa ulayishe inkqubo, ingxaki kukuba i-FSX ayifumaneki ngokukhawuleza neepakethe zenkonzo ezifunekayo. Makhe ndiyazi ... Siyabonga
iinyanga 11 4 kwiiveki ezidlulileyo #971 by robtho
Fantastic !! Ndiyabonga kakhulu ngcebiso yakho enomdla kunye nesikhokelo. Ukukhutshwa kwe-SP 1 & SP2 njengoko ucebisa ukuba kubonakala kusebenza ngoku ngoku. Ndiyabonga kwakhona.
iinyanga 11 4 kwiiveki ezidlulileyo #972 by DRCW
Yingakho silapha, ukunceda omnye nomnye ukuzonwabisa kwethu,
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: robtho
iinyanga 11 4 kwiiveki ezidlulileyo #974 by robtho